Qaybta 1. Samsung Recovery Password u Smart Phones iyo Laptops
Iyadoo koritaanka beegmay adduunka digital, kaydinta files, galalka, sawiro, qoraalo, iyo faahfaahinta kaarka ma jirto hawl celceliska. La fahmi karo, ammaanka ayaa noqday walaac ah. Waxaad sirta ah ee goobta kasta oo aad gasho, iyo boostada kasta oo aad marin u. Si kastaba ha ahaatee, ma fududa, waayo, mid tahay in la xusuusto oo dhan sirta ka Gmail, Hotmail, Facebook in yiri-, WordPress iyo Mobile Phone. Halkan waxaa ah sidii aad u tegi kartaa oo ku saabsan dib u soo kabashada ee sirta ah ee Samsung telefoonada smart iyo laptops dhex Hanuuniye tallaabo-tallaabo.
1. Fur qalab Samsung oo isticmaalaya Google Login
Xaaladdan oo aad qotomisay qufulka naqshad aad telefoonka ah oo halmaamay ah hannaanka saxda ah, si fudud aad u furid karaa iyadoo la isticmaalayo login account Google.
• Marka la isku dayayo marar badan la password aan sax ahayn (nidaam), waxaad arki lahayd a "Ilowday Password" ikhtiyaar aad screen mobile.
• Inta aad dooro "Ilowday Password" doorasho, waxaa lagu weydiin lahaa in aad geli username account Google iyo password. Haddii aad dhali cinwaano dhowr Google, waa in aad soo gashid faahfaahinta akoonka wixii si aad u phone hore aad loo isticmaalo.
• Marka aad si guul leh login, telefoonka noqon doonaa xidhin oo aad awoodi doonaan in ay ka taagay a qufulka / password cusub mar kale. Bazzinga.
2. Fur aad Device Samsung oo isticmaalaya Mobile Raadi Tool My
Raadi My Mobile waa xarun ay bixiyaan Samsung oo waxay noqon kartaa mid aad si fudud loo isticmaalaa in lagu furo aad Device Samsung. Dhammaan waxa aad u baahan tahay xisaab diiwaangashan Samsung (abuuray, halka lagu iibsado / samaynta telefoonka).
• Tag Samsung Raadi My Mobile iyo login la faahfaahinta xisaabtaada Samsung.
• In dhinaca bidix ee Raadi Mobile interface My, waxaad awoodi doonaan in ay arkaan qalab aad (kaliya haddii ay ka diiwaan gashan lahaa wax kale).
• Laga soo bilaabo qaybta la mid ah, la doorto ikhtiyaarka "Unlock My Screen" iyo sugto dhowr ilbiriqsi (tani waxay qaadan kartaa muddo ah ku xiran xawaaraha internet).
• Marka nidaamka la dhammeeyo, waxaad heli lahaa wargelin ah u sheegay in screen qufulka ayaa quful.
• Hubi in aad telefoonka, oo aad ka heli lahayd quful.
3. masixi aad Device Samsung oo isticmaalaya Manager Device Android
Haddii aad hore u suurta Manager Device Android on aad qalab, waxaad si fudud marna masixi karin xogta ay meel fog laga isticmaalayo Manager Device Android. Marka aad masixi xogta, waxaad awoodi doonaan in ay ka taagay qalab aad mar kale account Google iyo a screen quful cusub.
• Isticmaalka browser kasta, booqo halkan
• Saxeex oo isticmaalaya faahfaahinta xisaabtaada Google (waa in ay ahaataa account Google isku dadaalkii aad hore u isticmaali ah ee aad taleefan)
• Haddii aad leedahay qalab badan oo lala xiriiriyay xisaabta isla Google, dooro mid ka mid ah in la quful. Haddii kalese, qalabka lagu ayaa loo soo xulay lahaa by default.
• Dooro qufulka, iyo qortaa erayga sirta ah oo ku meel gaar ah in uu furmo muuqday. Waad ka boodi kartaa fariin soo kabashada (optional).
• Dooro ikhtiyaarka qufulka, iyo dhammaystirka guul ah geeddi-socodka, aad badhamada ee Ring, Lock iyo masixi arki lahaa.
• On telefoonka, beerta sir ah ayaa u muuqday lahaa, kuwaas oo aad u baahan tahay in nooca sirta ku meel gaar ah. Waxa uu furi lahaa telefoonka.
• Waxa ugu dambeeya waa in la tago ee qufulka goobaha screen iyo gab sirta ku meel gaar ah. Qabtay.
Muhiim: Isticmaalka farsamadan u furo telefoonka masixi doono oo dhan la gasho barnaamijyadooda, photos, music, qoraalada iwm Si kastaba ha ahaatee, xogta synched la account Google lahaa in la soo celiyo, laakiin dhammaan macluumaadka kale ee laga tirtirayaa lahaa iyo dhammaan Chine ay la xiriirey xogta la uninstalled lahaa.
4. Resetting qalab si Settings Factory
Resetting aad Device Samsung in Settings Factory waa mid ka mid ah hababka ugu adag in lagu furo telefoonka. Sidaas ma fududahay mana ka hortagtaa in khasaaraha ka mid ah xogta. Laakiin haddii ay dhacdo, markii mid ka mid ah siyaabaha hore ma sameeyo, waxaad dooran kartaa for this.
• Demi telefoonka.
• Press iyo godka Volume Up, Volume Down iyo Power furayaasha, ilaa screen tijaabo u muuqataa.
• Isticmaal Volume Down button dedeg Factory celi doorasho, iyo batoonka jaraa'id in ay doorasho.
• Marka aad ku screen System Android Recovery, hoos u isticmaali Volume fure u ah hoos u maraan si ay "tirtiri taariikhda / warshad dib" doorasho. Waxaa Dooro badhanka awood.
• Dooro "haa" doorasho, in xaqiijinta iyo tirtirto dhammaan xogta user.
• Marka dib warshad la dhammeeyo waxaad isticmaali kartaa xukunka Volume iyo Power si loo muujiyo oo dooro "reboot nidaamka hadda" doorasho iyo dib u adag tahay dhamaystiran iyo telefoonka gacanta noqon doonaa fiican iyo biibleeya nadiif ah.
La mid ah si ay Samsung telefoonada gacanta, password laptop sidoo kale la joojiyo oo kartaa tallaabooyinka fudud ee yar, iyada oo la isticmaalayo wax software dheeraad ah. Midkoodna aad u baahan tahay si ay u qaab, mana aad u baahan tahay in ay lumiyaan xogta aad. Warbixannada waxaa la samayn karaa iyada oo degdeg ah amarka, ka shaqeeya hab ammaan ah. Tani waa sida ay u socoto.
• Ku bilow in aad laptop iyo sii riixaya F8, ilaa menu u muuqdo.
• Dooro Qaabka Ammaanka leh Command degdeg ah ka menu.
• Riix Start iyo nooca 'Lauch' ama 'amarka' (aan xigashooyin), in bar raadinta. Tani furi lahaa amarka dhakhso ah u furmo suuqa.
• Nooca 'user shabaqa' oo ka dhacay galaan. Tani waxay muujiyaan lahaa dhammaan xisaabaadka user of your computer.
• Nooca 'user shabaqa' 'isgarad' 'Password' oo ka dhacay galaan (bedeli magacaaga iyo isgarad-idinkaa iska leh).
• Guuleysatey your computer iyo login la username iyo password cusub.
> Resource > Samsung > Samsung Recovery Password ee telefoonada Smart iyo Laptops